नेपाली कागती बारीमै कुहिए, बजारमा भारतीय कागतीको बिगबिगी – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
नेपाली कागती बारीमै कुहिए, बजारमा भारतीय कागतीको बिगबिगी
| प्रकासित मिति : २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
शिशिर सिंखडा, चितवन /भारतीय कागतीको कारण नेपालमा उत्पादन भएका कागतीहरु बारीमै कुहिन थालेका छन् । चितवनको विभिन्न स्थानमा किसानहरुले लगाएको ‘सुन कागती’ विक्री हुन सकेको छैन ।भारतबाट आयात हुने सोही सुनकागती भने नेपाली बजारमा विक्री भइरहेको छ । चितवनका मुख्य बजारहरुमा कागतीको थोक विक्रेताहरुले नेपाली कागतीलाई प्राथमिकता नदिएको कारण सोही एकै जातको कागती पनि विक्री हुन नसकी बारीमा नै पहेलो भई कुहिन थालेको कालिका वडा नं। ६ खोलेसिमलका किसान कृष्ण प्रसाद दाहालले बताए ।
चितवनका मुख्य बजार नारायणगढ र काठमाडौँमा पनि नेपाली कागतीले बजार पाउन सकेको छैन । अधिकाँश कागतीका व्यापार गर्ने ठूला व्यापारीहरु भारतीय रहेको र उनीहरुले भारतबाट आयातित कागतीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यहाँका किसान समस्यामा परेको उनले बताए । चितवनमा कागतीको होलसेल बजार मूल्य करिव १ सय ५० रुपैया प्रतिकिलो भएपनि नेपाली कागती ५०र६० रुपैयामा पनि विक्री हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कागतीले बजार नपाउँदा किसानहरुको लाखौको लगानी जोखिममा परेको कागती किसान सि।पी। अधिकारीले बताए । उनले पूर्वी चितवनको कालिका र रत्ननगरमा करिव ३ बिगाहामा कागती खेती गर्दै आएका छन् ।
कागती किसान दाहाल र अधिकारी प्रतिनिधि किसान मात्र हुन । उनीहरु जस्ता सयौँ किसानले लगाएको कागतीले बजार नपाई बारीमै ओइलिनु परेको छ । चितवनको ठिमुरा, जमुनापुर, खोलेसिमल र रत्ननगर क्षेत्रमा सहित करिव ३० बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा कागती खेती हुँदै आएको छ ।
प्रथम ठोरी हात्ती र तथा जिप सफारी महोत्सव शुरु
नक्कली जग्गाधनी खडागरी ३२ बिगाह जग्गा हिनामिना गर्ने सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
अवैध मिर्गौला प्रत्यारोपणस् चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
युवा अभियान्ता सरोजको नेतृत्वमा ६० दिने अभियान: सहिद स्मृती बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ तथा बृक्षारोपण २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
गृहजिल्ला चितवनबाट प्रचण्डले भने : हामीले मिलेर नयाँ नक्सा बनाएको हो, कोही दलाल‍ र कोही महान् राष्ट्रवादी होइन! २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
मृगौला किनबेचको अबैध धन्दामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल : प्रहरीले गर्यो डाक्टर र जनप्रतिनिधिसहित १२ जनाको नाम सार्वजनिक ! २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
गृह जिल्लामा ब्यस्त प्रचण्ड आज दिनभर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा । २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
मृगौला प्रत्यारोपणमा कुनैअवैधानिक र गैरकानुनी काम नगरेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको दाबी । २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
बाढीपहिरोबाट मर्नेको सख्ँया ८८, ३२ बेपत्ता २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१
श्रावण र भाद्र दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’ २६ पुस २०७६, शनिबार १८:२१